पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन : तपाईको आजको राशिफल : २०७५ साल असर १ गते शुक्रवार – Etajakhabar
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । सच्चिदानन्दरुपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे । ताप त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः ।पञ्चाङ्ग÷वारवेला,मुहूर्त र राशीश्रीसूर्य उत्तरायण,ग्रीष्म ऋतु,विरोधकृत् नाम संवत्सर,शाके १९४०,सम्वत २०७५ साल आषाढ१गते शुक्रबार नेपाल सम्बत ११३८ तछलाथ्व,सन् २०१८ जून१५ तारिक शुद्ध जेष्ठ शुक्लपक्ष द्वितीयातिथि राती ९ वजेर २० मिनेटसम्म,आद्र्रानक्षत्र दिवा२ वजेर २८मिनेटसम्म,वृद्धियोग, बालवकरण,आनन्दादियोग पद्म,सूर्य मिथुनराशीमा,चन्द्रमा मिथुन राशीमा ।
ॐः–राहुकालः–प्रातः१०÷२०वजेबाटमध्यान्ह १२÷४वजेसम्म रहनेछ,यमघण्टायोगः– दिवा३÷३२ वजेबाट ५÷१६ वजेसम्म रहनेछ, दूरमुहूर्तः–प्रातः७÷५४ वजेबाट ८÷५० वजेसम्म र मध्यान्ह १२÷३२ वजेबाट १÷२७ वजेसम्म रहनेछ,यी अशुभ मुहूर्त मानिन्छ । शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११÷३८ वजेबाट मध्यान्ह १२÷३४वजेसम्म रहनेछ,गुली कालः–प्रातः६÷५२ वजेबाट ८÷३६वजेसम्म रहनेछ, यो सामान्य मानिन्छ ।
ॐः–सूर्योदयबाट प्रातः ६÷५३ वजेसम्म चर वेला,६÷५३ वजेदेखि ८÷३७वजेसम्म लाभवेला,८÷३७ देखि १०÷२१ वजेसम्म अमृतवेला,१०÷२१ देखि १२÷४ वजेसम्म काल वेला,१२÷४ देखि १÷४८ वजेसम्म शुभवेला,१÷४८ देखि ३÷३२ वजेसम्म रोगवेला,३÷३२ देखि ५÷१५ वजेसम्म उद्वेगवेलार ५÷१५ वजे देखि सूर्यास्तसम्म चरवेला रहनेछ ।
ॐः–सूर्यास्तबाट ८÷१६ वजेसम्म रोगवेला,८÷१६ वजेदेखि ९÷३२ वजेसम्म काल वेला,९÷३२ देखि १०÷४८वजेसम्म लाभवेला,१०÷४८ देखि १२÷४ वजेसम्म उद्वेग वेला,१२÷४ देखि १÷२० वजेसम्म शुभवेला,१÷२० देखि २÷३७वजेसम्म अमृतवेला,२÷३७ वजे देखि ३÷५३ वजेसम्म चर र ३÷५३वजे देखि सूर्योदयसम्म रोगवेला रहनेछ ।
आफुमा भएको उर्जाको प्रयोग गर्नु होला लक्ष्यमा पुग्न सक्नु हुनेछ । सूचना नचुहानु होला आफुलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी बढ्नेछ । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ ।
आर्थिक कारोवारमा सतर्क रहनु होला नत्र आज दिएको धन डुब्न सक्छ । काम गर्दा आफन्तबाट विश्वास घात हुनसक्छ । काममा अस्थिरता आउनेछ,प्रयत्न नगरि कुनै काम बन्ने छैनन ।
शरीरिक एवं मानसिक स्फूर्ति बढ्नेछ । अध्ययन अध्यापन मार्ग सफल देखिन्छ । वैतनिक मार्ग आंशिक सफल देखिन्छ । वित्तिय क्षेत्रमा सामान्य सुधार आउनेछ । इष्टमित्रको सहयोगमा काम बन्ने छन् ।
आशा र भरोसा टुट्नेछ । साझेदारी काममा विवाद बढ्नेछ । आफन्तसँग वियोग र विछोडको सम्भावना पनि देखिन्छ । अनावस्यक खर्चमा वृद्धि हुनेछ । काम गरेर जश पाईने छैन । व्यापारमा घाटा हुनसक्छ ।
सवै कुरा सवैलाई भन्दा आफ्नो भाग्य खोसिन सक्छ ध्यान दिएर काम गर्नु होला । नसोचेका ठाँउबाट धन हात लागि हुनेछ । गरेका अधिकाँश काम सफल हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ ।
विगतका कमजोरी हटेर जाने छन् । सहज,सरल तरिका बाट कार्य सम्पादन हुनेछन् । सामाजिक क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान दिन सफल हुुनुहुनेछ । गरेका कामबाट आर्थिक लाभ हुनेछ ।
काम गर्दा असहज महशुस हुनेछ । अव्यवहारिक,अराजनैतिक व्यक्ति सँग भेट हुनेछ । मनमा अराजकता फैलिनेछ । घरमा बस्न मन लाग्ने छैन । अनावस्यक काममा समय खेर जानेछ । व्यापार घट्नेछ ।
अस्वास्थता बढ्न सक्छ । अर्थ व्यवस्था कमजोर बन्नेछ । मनमा अशान्ति फैलिनेछ । झुट्टा आश्वासनको पछि नलाग्नु होला पछि दुःख पाईनेछ । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ ।जोखिम नमोल्नु होला ।
कुरा भन्दा कामलाई प्राथमिकता दिनुहोला दिन अनुकुल नै देखिन्छ । दैनिक कामम प्रगति हुनेछ । नयाँ कामको अवसर आउन सक्छ प्रयत्न गरेको खण्डमा । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ ।
आफन्तमा वैरभाव उत्पन्न हुन सक्छ । कार्य सम्पादन गर्न कठिनाई हुनेछ । काम गर्दा रिस,डाहा गर्ने कम हुने छैनन । श्रमको फल भने प्राप्त हुनेछ । शत्रु माथि विजय प्राप्त हुनेछ ।
समयमा विस्तारै सुधार आउनेछ । अध्ययन अध्यापन कार्य अगाडि बढ्नेछन् । मानसिक तनावमा कमि आउनेछ । न्यायिक,नर्सरी,वास्तुकला, वित्तिय प्रतिष्ठान तथा व्यापार व्यवसायबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ ।
आर्थिक कुराले बढि पिरोल्नेछ । काम प्रतिको लगाव घट्नेछ । पारिवारिक खर्च बढ्नेछ । स्वागत सत्कारमा व्यस्त भईनेछ । भेटघाट बढ्नेछ । उपलब्धिका काम कम हुनेछन् । पढाई लेखाईमा ध्यान कम जानेछ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ३१, २०७५ समय: २२:२२:४१
“पाथीभरामाइले हामी सबैको रक्षा गरुन ! २०७५ साल फाल्गुन ११ गते शनिबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल फाल्गुन १० गते शुक्रबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७५ साल फाल्गुन ९ गते विहिबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल फाल्गुन ८ गते बुधबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७५ साल फाल्गुन ७ गते मँगलबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”